by Admin on Tue Feb 23, 2016 3:36 am
by Admin on Tue Feb 23, 2016 3:37 am
Sen. Ted Cruz (R-Texas) uthathé nekhasi Presidential emkhankasweni Playbook Donald Trump sika, lukhuni mpendulo yakhe emelene izifiki ezingamaProthestani undocumented.
Cruz utshele Fox News aphethe Bill O'Reilly ngoMsombuluko ukuthi yebo, kufanele nguMengameli, ukuphatha kwakhe kwakuyoba xosha bonke abantu abayizigidi ezingu-12 undocumented kulinganiselwa ukuthi e-US kanye kawavumelanga ukuba babuyele.
"Kufanele ukuthotshelwa komthetho ... umthetho federal kudinga ukuthi umuntu lapha ngokungemthetho lokho sengikubambile kufanele badingiswe," kusho Cruz. "Yebo" Wayenza bheka izifiki undocumented, esho.
Cruz uthe America uzobe akha udonga ngasemngceleni U.S-Mexico, kathathu ibutho emngceleni futhi amise biometric entry izinhlelo "kanjalo sizokwazi othile usuku overstays ivisa."
imibono Cruz 'amelela kwengxabano mpendulo evela candidate abenqaba umqondo "kokuxoshwa kwezithunywa ibutho" of "jackboots" ngenyanga nje edlule, futhi lambasted umqondo emva kwahlongozwa ngu GOP front-umgijimi Trump. Cruz ngo-January wathi somgomo wokusetshenziswa kwezilimi eziningi siyobonisa 'isimo amaphoyisa, "enezela," Lokho akulona kanjani sifaka umthetho noma yibuphi ubugebengu. "
Cruz ukucindezelwa ngalolu daba ngoMsombuluko O'Reilly, ngubani ngamcela ukuthi bafune ngamanga Irishman Tommy O'Malley futhi xosha kuye ngenxa overstaying visa yakhe.
"Niyakholwa kangcono," kusho Cruz. "Bobabili Donald Trump futhi Marco Rubio ezongenza labo abantu abayizigidi ezingu-12 ukuba babe izakhamuzi U.S. Ngeke."